Home Wararka Maxaa Baydhabo Ciidanka Federaalka loo geeyey, Garoowe lama geynine.?
Maxaa Baydhabo Ciidanka Federaalka loo geeyey, Garoowe lama geynine.?
Waxaa muuqata inu dawladda ay ujeeddo gaar ah ka leedahay Baydhabo iyo K/Galbeed oo ay rabto inay gacata ku dhigto Dawlad goboleedka K/Galbeed tan oo salka ku haysa warar xog ah oo ay hadda ka hor soo qoraty MOL kuwaas oo ahaa inuu Madaxweyne Farmaajo u gogol xaarayo inay reerkiisa gacata ku dhigaan gobbollada Jubbooyinka iyadoo loo sii marayo in marka hore Madaxweyne Goboleed maqaarsaar ah la saarto K/Galbeed, kadibana halkaas laga weeraro Jubbooynka.
Puntland waxaa 19 ka Janaayo, waa bil kadib doorashada K/Galbeed, ka dhacaysa doorasho tan oo la mid ah tan K/G, haddaba waa maxay sababta aysan dawladd Federalka u geyneynin ciidan Federaal ah Puntland/ misa reer K/Galbeed ayaa ka liita reer Puntland oo aan is maamuli Karin, misa hadalkii Xasan Cali Kheyre ayaa la rumeynayaa oo ahaa “Raxanweyn waa Beec”. Waa arrimaha u baahan in si fiican loo eego inta ay goori goor tahay.
Waxaa muuqata iny ciidanka uu yahay hordhac iyo bilow lagu talagalayo in musqtaqbalka dhow halkaas la geeyo ciidan reer Gadood ah oo oo marka hore Baydhabo qas laga sameynayo si marmarsiiyo loogu helo in ciidan badan lagu soo daabulo dawladduna ay u hesho marmarsiiyo ay tiraahdo ammaanka K/Galbeed ayaan sugeynaa.
Maanta xilddhibaanada K/Galbeed waxaa haboon inay dhinac iska dhigaan kala aragti duwanaanshahooda ee ay awoodooda isugu geeyaan inay Badbaadiyaan Maamulka u dhisan oo hawl badan iyo kharasha badan uu kaga baxay sidii loo soo dhisay. Cidi kuma doodeyso waa dhameystiran yahay ama waxaa u dhan caddaaladii la rabay bale waa meela wax badan laga hagaajin karo.
Shalay shir saxaafadeed ay qabteen xildhiibanada ka soo jeedada degaanndaas kuwooda u daacadda ah degaanka ee aan hunguri doonka ahayn waxay ku sheegeen inya khalad tahay in ciidan gaar ah ay halkaas keensadaan Farmajo iyo Kheyre, kuwasoo loo soo geliyey shaati dawladeed. Su’aalaha ay keeneen ee jawaabta u baahan waxay yihiin waa sababta loogu baahday ciidankaas iyadoo ay joogaan ciidan awood u leh ilaalinta doorashooyinka oo reer K/Galbeed ah?
MOL waxay uga digeysaa dawladdan oo la wareegtay dal horay u socdaa ee loo dhisay inay wax wanaagsan ku sii darto inaysan halkaas ka abuurin qas keeni kara dagaallo sokeeye oo dad badani ku hoobtaan. Dhimasho waxaa noogu filan intii naga dhimatay maanta looma baahna inay dad kale naga dhintaan. Dalka waxaa uu joogaa meel uu miir qabo oo uu fogaan arag iyo fiira dheer u leeyahay waxa soo socda. Sidaas darted dawladdaan hadda xamar ka jirtaa waxay dalka ku wadda Khater ee waa ina la saxaa ama a iska qabtaa.
Previous articleWar Deg Deg ah:-Doorashada K/Galbeed oo mar kale dib loo dhigay
Next articlemaxaa sabab u ah in dib loo dhigo Doorashada Madaxtinimo ee Maamulka Koonfur Galbeed
Al-Shabaab oo weerar ku qaaday Beledweyne